ယေရှုသည်ထမြောက်တော်မူသည် - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2020-03 > ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီ၊
အစမှအစဘုရားသခင့်အလိုတော်သည်လူကိုအသီးမှည့ ်၍ အသီးကိုသီးစေလိုသောအပင်ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်လူ၏ ၀ ိညာဉ်ကိုစည်းလုံးစေလိုသည်။ အာဒံနှင့် Eve ၀ တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူဘဝကိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့သည်ဘုရားသခင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝရှိသည်ဟုစာတန်၏မုသာကိုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်၏အပြစ်ကိုသူ့ထံမှအမွေရရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးမရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးတွင်မွေးကင်းစကလေးများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကုန်ဆုံးချိန်၌သေရမည်။ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံတော်မှမိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်သည်ဟုထင်သောလမ်းစဉ်သို့ပို့ဆောင်။ သေစေနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းပြသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အပြစ်နှင့်အပြစ်ပြုနိုင်သောသဘောသဘာဝကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ရလဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ခြေလှမ်းအတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
«Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren» (Römer 5,10 NLB). Jesus versöhnte uns durch seinen Tod mit Gott. Viele Christen bleiben bei dieser Tatsache stehen. Es fällt ihnen schwer, ein Leben zu leben, das Christus entspricht, weil sie den zweiten Teil des Verses nicht verstehen:
«Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden» (Römer 5,10 NLB). Was bedeutet es, durch das Leben von Christus gerettet zu werden? Wer zu Christus gehört, ist mit ihm gekreuzigt, gestorben und begraben worden und kann nichts mehr aus sich selber tun. Christus ist auferstanden, um Menschen, die mit ihm gestorben sind, mit seinem Leben zu erfüllen. Nehmen Sie Jesu Leben zu Ihrer Erlösung genauso in Anspruch, wie die Versöhnung, dann ist Jesus in Ihnen zu neuem Leben auferstanden. Durch den Glauben Jesu, mit dem Sie übereinstimmen, lebt Jesus sein Leben in Ihnen. Sie haben durch ihn ein neues, geistliches Leben empfangen. Ewiges Leben! Die Jünger Jesu konnten diese geistliche Dimension vor dem Pfingstfest, als der Heilige Geist noch nicht in den Jüngern war, nicht verstehen.
Es waren schon drei Tage vergangen, seit Jesus verurteilt, gekreuzigt und begraben wurde. Zwei seiner Jünger waren zu Fuss unterwegs in ein Dorf namens Emmaus: «Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten» (Lukas 24,15-16) ။
သငျသညျယရှေုသညျဘယ်အချိန်မှာတွေ့ကြုံခံစားသလဲ သူသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ကအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးသေဆုံးခဲ့သည့်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လော။ ဒီနေ့ယေရှုကိုသင်ဘယ်လိုတွေ့ကြုံရသလဲ မင်းဘဝရဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုခံစားဖူးသလား။ သူသည်သင်၏သေခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်သင့်ကိုပြန်လည်သင့်မြတ်စေပြီးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေ့သွားသည်ကိုသင်သိပါသလော။
An anderer Stelle lesen wir: «Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten» (Johannes 6,33-35) ။
Wie hat Petrus diese Freude später beschrieben? «Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit» (1. ဓာတ်ဆီ 1,8-9). Petrus erfuhr diese unaussprechliche und herrliche Freude, als er dem auferstandenen Jesus begegnete.
«Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes» (1. ဓာတ်ဆီ 1,18-19) ။
Golgotha ​​အပေါ်သွေးထွက်သံယိုမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သူပတေရုကဤစကားများကိုရေးသားခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်၊ မဝယ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်သားတော်သေဆုံးခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်ထာဝရအသက်အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
Gott blies Adam im Garten Eden den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde er ein lebendiges Wesen. «Wie geschrieben steht: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht» (1. ကောရိန္သု ၁5,45).
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်ရေးအရသေခြင်း၌မွေးဖွားလာသူများကိုယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ပြန်ရှင်စေသည်။ ယေရှု၏တပည့်များသည်ယခုအချိန်တွင်ဝိညာဉ်ရေးအရအသက်မရှင်သေးပါ။
«Als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheissung des Vaters, die ihr – so sprach er – von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen» (Apostelgeschichte 1,4-5) ။
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ဗတ္တိဇံခံရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ဝိညာဉ်ရေးရာသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအာဒံဖြစ်သောယေရှုအားဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်စေခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
Wie und wann wurde Petrus wiedergeboren? «Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten» (1. ဓာတ်ဆီ 1,3). Petrus wurde durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren.
လူတို့အားအသက်ပြန်ရှင်စေရန်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ကြွလာခဲ့သည်။ ယေရှုသည်လူသားတို့အားသေခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အတွင်း၌နေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်တာသစ်ကိုပေးခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့သခင်ယေရှုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သက်သေအားဖြင့်သူတို့၌တည်နေကြောင်းကိုသူတို့သိကြသည်။ သူသည်သူမ၏ဝိညာဉ်ရေးကိုရှင်သန်စေခဲ့သည်။ သူကသူ့ဘ ၀၊ ဘုရားသခင့်အသက်၊ ထာဝရအသက်ကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့အဆုံးမဲ့ဘဝရင်းမြစ်မှခွန်အားရယူနိုင်သနည်း။ ယေရှုသည်သင့်အတွင်း၌ နေ၍ သင်၌တက်ကြွရန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သူ့ကိုဘယ်လိုခွင့်ပြုချက်ပေးသလဲ။ သင်၏စိတ်၊ ခံစားချက်များ၊ သင်၏အတွေးများ၊ အလိုတော်၊ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သင်၏အချိန်၊ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်၏ဖြစ်တည်မှုအားလုံးအပေါ်သခင်ယေရှုကိုအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါသလား။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်၎င်းကိုသင်၏အပြုအမူနှင့်အပြုအမူများမှအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။
«Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird grössere als diese tun; denn ich gehe zum Vater» (Johannes 14,11-12) ။
သင့်ကိုယ်သင်ဘာမှမတတ်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုနှိမ့်ချစွာဝန်ခံရန်ဘုရားသခင့်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်၏အတွင်း၌အလုပ်လုပ်စေ။ သင်၌ကျိန်းဝပ်တော်မူသောယေရှုသည်သင်နှင့်အတူအရာရာတိုင်းကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟူသောအသိပညာနှင့်ယုံကြည်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သခင်ယေရှု၏အလိုတော်အတိုင်းအပြောအဆို၊ အပြုအမူအားဖြင့်သူနှင့်သင်ဘာလုပ်သင့်သည်ကိုအချိန်မရွေးပြောပြပါ။
သူသည်သင့်အတွင်း၌နေထိုင်ပြီးသင့်အားသူကိုသင့်အားဖြည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်ကိုဘုရားသခင်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်ပါ။ သင့်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်အတူ, ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုသငျသညျပုံဖော်ပါတယ်!